गएको एक वर्ष कृषिको क्षेत्रमा के-कस्ता उपलब्धी भए? – HamroKatha
गएको एक वर्ष कृषिको क्षेत्रमा के-कस्ता उपलब्धी भए?
सरकारबाट कृषि क्षेत्रमा यस्ता काम भएका छन्
हाम्रो कथा २०७५ फागुन १० गते १६:३१
यो बर्ष ५६ लाख १० हजार १० मेट्रिक टन धान उत्पादन भयो । मकैको उत्पादन बढेर २६ लाख ४४ हजार ८०१ मेट्रिक टन पुग्यो । उत्पादन वृद्धिको लागि सरकारले वर्णशंकर तथा उन्नत बीउको प्रयोगलाई जोड दिईयो ।
यो बर्ष सबै किसानसम्म रासायनिक मल समयमैं पुग्यो । युरिया मलको आपुर्ति ११.३ प्रतिशत, डि.ए.पी. मलको आपुर्ति ३२ प्रतिशत र पोटासको आपुर्ति शतप्रतिशत वृद्धि गरिएको थियो । तरकारी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै गयौं । यो बर्ष ४७ लाख ७५ हजार ६२१ मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन भयो।
सिंचाई व्यवस्थापनमा कुनै सम्झौता भएको छैन । देशभर १ हजार २२४ साना सिंचाई, २० वटा तराईका जिल्लामा २ हजार ७०० स्यालो ट्युववेल र ३ वटा जिल्लामा ४ वटा डीप ट्युववेल जडान भयो । यसबाट २० हजार हेक्टर जमिनमा थप सिंचाइ पुगेको छ ।
किसानका उत्पादन विक्रि गर्ने बजार बन्यो । मोरङको कटहरीमा तरकारी, फलफुल तथा हाट बजार, झापाको दमक र धनुषाको महेन्द्रनगरमा पशुपन्छी बजार निर्माण भयो । बुटवलको कृषि थोक बजारको स्तरोन्नती भएको छ भने चोभारमा २ वटा फलफुल र १ वटा पुष्प वजारको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
कृषि उपज भण्डारण गर्न शीत भण्डार गृह बनेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्र्तगत २ वटा जिल्लामा शीत भण्डार गृह बनिरहेका छन् । ११ वटा शीत भण्डार गृह निर्माणका लागि छनौट गरिएको छ।
उच्च मुल्य कृषि वस्तु उत्पादनका लागि प्रोत्साहन भएको छ । ५ सय समूह, सहकारी तथा निजी फार्महरुलाई ५० करोड बराबरको पुरक अनुदान उपलब्ध गराईएको छ । कृषि तथा पशुपन्छि बीमाका लागि सरकारले ३५ करोड अनुदान उपलब्ध गरायो ।
विदेशबाट फर्केका र शिक्षित वेरोजगार युवालाई व्यवसायीक पशुपन्छि पालनमा आकर्षित गरिएको छ । दुग्द्य संकलन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र र मासुपसल सुधारका लागि २२५ युवा कृषकलाई २ लाख रुपैंयाका दरले अनुदान उपलब्ध गराईएको छ ।
मिल्क होलिडे हुन दिईएको छैन। पशुपन्छिमा हुने रोग नियन्त्रणमा ध्यान दिईएको छ । भ्याक्सिन अभाव हुन नदिन ३ करोड ५२ लाख डोज खोप उत्पादन भयो । पशुपन्छिको गर्भाधानमा समस्या आउन नदिन कृत्रिम गर्भाधान सेवालाई व्यवस्थित बनाउँदै लागिएको छ ।
उखु उत्पादन गर्ने किसानलाई अनुदानको व्यवस्था । तरकारी बजारमा बदमासी गर्नेलाई कारबाही भएको छ । कालिमाटी तरकारी बजारमा नियम विपरित सञ्चालन भएको ९८ व्यवसायी उपर कारबाहि भएको छ ।